Maxaa Jilciya Guska Ragga? Ragguse maku Baraagrugsanyihiin!!!!! | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Maxaa Jilciya Guska Ragga? Ragguse maku Baraagrugsanyihiin!!!!!
Thursday, April 27, 2017 Bulshada Edit
Bulsha:- Badanaa waxaan maqalnaa ragga iyo dumarka oo is eedeeya, gaar ahaana bulshadeena Soomaalida, iyadoo mid walbaaba kan kale ku eedeynayo inuusan laheyn naxariis jaceyl, soo jiidasho macaan, kasbashada amaanta iyo arimo kaloo badan. Waxaase muhiim ah in qof walbaabo marka hore barto shucuurta qofka uu la tacaamulayo, isla markaana uu fikir ku filan ka helo la dhaqanka iyo jaanqaadka ugu haboon ee xiliga la joogo iyo qofka uu la joogo dabcigiisa.